कोरोना संक्रमित व्यक्तिमा पुनः संक्रमण किन फैलदैछ ? – Kantipur Press
कोरोना भाइरसबाट विश्वभरमा ९० लाख बढी संक्रमित छन् । यसमध्ये ४८ लाखले कोरोनालाई जितेका छन् । जबकी कोरोना भाइरस विरुद्ध कुनै औषधि वा खोप तयार भइसकेको छैन ।
यसैले जतिपनि कोरोनालाई जितेर घर फर्केका छन्, त्यसमा उनीहरुको प्रतिरक्षा क्षमताले खास काम गरेको छ । खासगरी शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीद्वारा बनेको एन्टीबडीजको कारण ।
एक नयाँ अध्ययन अनुसार कोरोना भाइरसको विरुद्ध मानव शरीरमा जुन एन्टीबडिज बनेको छ, त्यसले बढीमा २–३ महिनासम्म मात्र असर गर्छ । के त्यसो भए कोरोना संक्रमित व्यक्ति निको भइसकेपछि पुन उनमा यो भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम छ ?
वैज्ञानिकका अनुसार यो अध्ययन अहिले सानो स्तरमा मात्र गरिएको छ । तर, यसले कोरोना प्रवृत्तिका सम्बन्धमा मोटामोटी अवस्था देखाउन सक्छ ।अनलाईन खबरबाट
कोरियामा आजमात्रै ६० जना नयाँ सङ्क्रमित थपिए !